【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】သှေးဝမျးသှားခွငျး၊ သှေးအနျခွငျး (Haematemesis & Melaena) အကွောငျး | Opinion Leaders
သှေးဝမျးသှားတယျ၊ သှေးအနျတယျ ဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျက သှေးဆုံးရှုံးလိုကျရတာဖွဈလို့ အရေးကွီးတဲ့ အခွအေနတေဈခုပါ။
Haematemesis - သှေးအနျခွငျး
သှေးအရောငျ (bright red) တှေ အနျတာ ဒါမှမဟုတျ ကျောဖီနှဈရောငျတှေ အနျတာကို ချေါတာပါ။
Melaena - သှေးဝမျးသှားခွငျး
ကတ်တရာစေးလို မညျးနကျပီး စေးပဈြပဈြ ဝမျးတှေ သှားတာပါ။ သှေးဝမျးသှားတဲ့ အနံ့က သိသာတယျ အလှနျဆိုးပါတယျ။ အိမျသာကမုတျမှာ ရလေောငျးခလြိုကျရငျ သှေးရောငျ အရဲအဖွဈပွောငျးသှားတာ တှရေ့မှာပါ။ (တခါတရံ အခွားအကွောငျးရငျးကွောငျ့ ဝမျးမညျးတာမြိုး
ဥပမာ- သံဓါတျအားဆေးသောကျထားတာ ဒီလိုအခွအေနတှေနေဲ့ ခှဲ ခွားနိုငျဖို့ပါ)
ဒီ အခွအေနနှေဈခုလုံးက အူလမျးကွောငျးအပျေါပိုငျးက သှေးထှကျနတောကို ပွတာပါ။
ဘာကွောငျ့ သှေးဝမျးသှား သှေးအနျခွငျးဖွဈရတာလဲ?
(၁)အစာအိမျအနာ (သို့) အူသိမျအနာ က သှေးထှကျခွငျး (Peptic Ulcer bleeding - most common cause)
(၂)အစာအိမျနံရံ ပှနျးခွငျး (Gastric erosions)
(၃)အစာအိမျသှေးကွောထုံးမြားမှ သှေးထှကျခွငျး (Variceal bleeding)
(၅)Mallory-Weiss tear (အရမျးအနျတဲ့အခါ အစာရပွှေနျအောကျပိုငျးနံရံလေးပွဲထှကျသှားခွငျး၊ အရကျသောကျတဲ့သူတှမှော ပိုဖွဈတတျပါတယျ)
(၆)အစာအိမျကငျဆာ နဲ့ အစာရပွှေနျကငျဆာ
-အစာမကွခွေငျး၊ ရငျပူခွငျး လက်ခဏာရှိသူ​တှေ ၊ အစာအိမျအနာရှိတဲ့ ရာဇဝငျရှိဖူးသူတှေ
-အကိုကျအခဲပြောကျဆေး (NSAIDs)၊ အရောငျကဆြေး (Steroids)၊ သှေးကြဲဆေး ဒီလိုဆေးမြိုးတှေ ရရှေညျသောကျနရေတဲ့ လူနာတှေ
-အစာမွိုရခကျတာ မွိုရငျနာတာ ဒီလို လက်ခဏာရှိတဲ့သူတှေ၊ စားသမြှအနျတာ အလှနျအမငျးပိနျသှားတာ (ဒီလက်ခဏာတှကေတော့ အစာရပွှေနျနဲ့ အစာအိမျကငျဆာလက်ခဏာတှပေါ)
အပျေါမှာ ပွောသလို သှေးဝမျးသှားတာ သှေးအနျတာက အရေးပျေါအခွအေနတေခုပါ။ ခန်ဓာကိုယျက သှေးတှေ ဆုံးရှုံးသှားတာဖွဈလို့ ရှော့ချရခွငျး (Hypovolaemic shock) ဖွဈပွီး အသကျဆုံးရှုံးနိုငျပါတယျ။ သှေးထှကျလှနျတဲ့ လက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့ မူးဝခွေငျး၊ ဖွူဖြော့သှားခွငျး၊ ဗိုကျအောငျ့ခွငျး၊ ရှော့ချရတဲ့ လက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့-
-ဆီးနညျးခွငျး ဒီလိုလက်ခဏာတှရှေိတာနဲ့ နီးစပျရာဆေးရုံသို့ အမွနျဆုံးသှားရောကျသငျ့ပါတယျ။
ရှော့ချရနတေဲ့ အခွအေနမှောတော့ အရေးပျေါအသကျကယျခွငျး လိုမှာပါ။ လိုအပျတဲ့ စမျးသပျမှုတှလေုပျပွီး သတိလဈနရေငျတော့ အနျလိုကျတဲ့ သှေးတှေ အသကျရှုလမျးကွောငျးထဲ ရောကျမသှားအောငျ လပွှေနျပိတျမသှားအောငျ လိုအပျတဲ့ကုသမှုတှလေုပျမယျ။ ရှော့ချအခွအေနမှော အရညျဆုံးရှုံးတာ ပွနျဖွညျ့ဖို့ အရေးကွီးတာကွောငျ့ သှေးကွော line ထညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။(14-16G) လောကျရှိတဲ့ အရှယျကွီးကွီး cannula ထညျ့ပီး လိုအပျတဲ့ သှေးစဈဆေးမှုတှေ ( သှေး အုပျစု စဈဆေးခွငျး နှငျ့ အခွားလိုအပျသညျမြား) ယူထားမယျ။ သှေးရပီဆိုတာနဲ့ ခကျြခငျြးသှေးပွနျဖွညျ့မယျ။ သှေးမရခငျမှာတော့ drip အရညျတှေ ထှကျသလောကျ ပမာဏအလိုကျပွနျဖွညျ့မယျ။ ပါးစပျကနေ အစာ ရေ ဘာမှမကြှေးဘဲ (Nothing by mouth)ထားရမယျ။ အစာအိမျသှေးကွောထုံးတှပေေါကျတာလို့ သံသယရှိရငျတော့ terlipressin လို့ချေါတဲ့ ဆေးတမြိုးသှငျးမယျ။ ပိုးသတျဆေးသှငျးခွငျး၊ ဆီးပိုကျ ထညျ့ခွငျးတှေ ပွုလုပျမယျ။
သှေးပွနျဖွညျ့ အရညျပွနျဖွညျ့ပီးလို့ လူနာအခွအေနေ တညျငွိမျလာပီဆိုရငျတော့ အစာအိမျမှနျပွောငျးကွညျ့ခွငျး (Endoscopy) အမွနျဆုံးလုပျပွီး သှေးတိတျအောငျ လိုအပျတဲ့ ကုသမှုတှေ လုပျဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။
-အစာအိမျအနာရှိရငျတော့ သှေးထှကျတဲ့နရောကျု clip ညှပျခွငျး၊ cautry မီးရှို့ခွငျး၊ Adrenaline ဆေးဖွနျခွငျး ဒီနညျးတှနေဲ့ သှေးတိတျအောငျလုပျနိုငျပါတယျ။ မှနျပွောငျးကွညျ့အပွီး အကျဆဈဓါတျနညျးစတေဲ့ PPI ဆေးသှငျးခွငျး၊ H.pylori လို့ချေါတဲ့ အစာအိမျပိုးအတှကျ ပိုးသတျဆေးပေးခွငျးမြား ပွုလုပျဖို့လိုပါတယျ။
-အသညျးခွောကျလို့ အစာအိမျသှေးကွောထုံးတဲ့နရောက ပေါကျလို့ သှေးထှကျရငျတော့ ကွိုးခညျြခွငျး(Banding), ဆေးထိုးခွငျး (Sclerotherapy) စတာတှေ လုပျဖို့လိုမှာပါ။ ဒီလို ကုသမှုတှေ လုပျပွီးတာတောငျမှ တနှဈအတှငျးနောကျတကွိမျပွနျသှေးထှကျခွငျး (Re-bleeding) ဖွဈဖို့ ၆၀ရာခိုငျနှုနျး risk ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အသညျးခွောကျတဲ့သူတှမှော အစာအိမျသှေးကွောပေါကျတဲ့ အခွအေနမေရောကျခငျတညျးက ကွိုတငျ ကာကှယျသငျ့ပါတယျ။
အသညျးခွောကျတဲ့ လက်ခဏာတှမေ့ယျ၊ သို့မဟုတျ အာထရာဆောငျးမှာ အသညျးခွောကျတာသိတာနဲ့ ကွိုတငျ အစာအိမျမှနျပွောငျးကွညျ့ပီး လိုအပျတဲ့ နရောကို ကွိုးခညျြခွငျး ကုသခွငျးတှလေုပျထားမယျ။ Beta-blocker ဆေးဖွဈတဲ့ propranolol ပေးခွငျးတို့ ဖွဈပါတယျ။
ဇီဝက ( ဆေး- ၁ )
သွေးဝမ်းသွားတယ်၊ သွေးအန်တယ် ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်က သွေးဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်လို့ အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ။
Haematemesis - သွေးအန်ခြင်း
သွေးအရောင် (bright red) တွေ အန်တာ ဒါမှမဟုတ် ကော်ဖီနှစ်ရောင်တွေ အန်တာကို ခေါ်တာပါ။
Melaena - သွေးဝမ်းသွားခြင်း
ကတ္တရာစေးလို မည်းနက်ပီး စေးပျစ်ပျစ် ဝမ်းတွေ သွားတာပါ။ သွေးဝမ်းသွားတဲ့ အနံ့က သိသာတယ် အလွန်ဆိုးပါတယ်။ အိမ်သာကမုတ်မှာ ရေလောင်းချလိုက်ရင် သွေးရောင် အရဲအဖြစ်ပြောင်းသွားတာ တွေ့ရမှာပါ။ (တခါတရံ အခြားအကြောင်းရင်းကြောင့် ဝမ်းမည်းတာမျိုး
ဥပမာ- သံဓါတ်အားဆေးသောက်ထားတာ ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ ခွဲ ခြားနိုင်ဖို့ပါ)
ဒီ အခြေအနေနှစ်ခုလုံးက အူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းက သွေးထွက်နေတာကို ပြတာပါ။
ဘာကြောင့် သွေးဝမ်းသွား သွေးအန်ခြင်းဖြစ်ရတာလဲ?
(၁)အစာအိမ်အနာ (သို့) အူသိမ်အနာ က သွေးထွက်ခြင်း (Peptic Ulcer bleeding - most common cause)
(၂)အစာအိမ်နံရံ ပွန်းခြင်း (Gastric erosions)
(၃)အစာအိမ်သွေးကြောထုံးများမှ သွေးထွက်ခြင်း (Variceal bleeding)
(၅)Mallory-Weiss tear (အရမ်းအန်တဲ့အခါ အစာရေပြွန်အောက်ပိုင်းနံရံလေးပြဲထွက်သွားခြင်း၊ အရက်သောက်တဲ့သူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်)
(၆)အစာအိမ်ကင်ဆာ နဲ့ အစာရေပြွန်ကင်ဆာ
-အစာမကြေခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း လက္ခဏာရှိသူ​တွေ ၊ အစာအိမ်အနာရှိတဲ့ ရာဇဝင်ရှိဖူးသူတွေ
-အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး (NSAIDs)၊ အရောင်ကျဆေး (Steroids)၊ သွေးကျဲဆေး ဒီလိုဆေးမျိုးတွေ ရေရှည်သောက်နေရတဲ့ လူနာတွေ
-အစာမြိုရခက်တာ မြိုရင်နာတာ ဒီလို လက္ခဏာရှိတဲ့သူတွေ၊ စားသမျှအန်တာ အလွန်အမင်းပိန်သွားတာ (ဒီလက္ခဏာတွေကတော့ အစာရေပြွန်နဲ့ အစာအိမ်ကင်ဆာလက္ခဏာတွေပါ)
အပေါ်မှာ ပြောသလို သွေးဝမ်းသွားတာ သွေးအန်တာက အရေးပေါ်အခြေအနေတခုပါ။ ခန္ဓာကိုယ်က သွေးတွေ ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်လို့ ရှော့ခ်ရခြင်း (Hypovolaemic shock) ဖြစ်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ သွေးထွက်လွန်တဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ မူးဝေခြင်း၊ ဖြူဖျော့သွားခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ရှော့ခ်ရတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့-
-ဆီးနည်းခြင်း ဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိတာနဲ့ နီးစပ်ရာဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်သင့်ပါတယ်။
ရှော့ခ်ရနေတဲ့ အခြေအနေမှာတော့ အရေးပေါ်အသက်ကယ်ခြင်း လိုမှာပါ။ လိုအပ်တဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီး သတိလစ်နေရင်တော့ အန်လိုက်တဲ့ သွေးတွေ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းထဲ ရောက်မသွားအောင် လေပြွန်ပိတ်မသွားအောင် လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေလုပ်မယ်။ ရှော့ခ်အခြေအနေမှာ အရည်ဆုံးရှုံးတာ ပြန်ဖြည့်ဖို့ အရေးကြီးတာကြောင့် သွေးကြော line ထည့်ဖို့ လိုပါတယ်။(14-16G) လောက်ရှိတဲ့ အရွယ်ကြီးကြီး cannula ထည့်ပီး လိုအပ်တဲ့ သွေးစစ်ဆေးမှုတွေ ( သွေး အုပ်စု စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အခြားလိုအပ်သည်များ) ယူထားမယ်။ သွေးရပီဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းသွေးပြန်ဖြည့်မယ်။ သွေးမရခင်မှာတော့ drip အရည်တွေ ထွက်သလောက် ပမာဏအလိုက်ပြန်ဖြည့်မယ်။ ပါးစပ်ကနေ အစာ ရေ ဘာမှမကျွေးဘဲ (Nothing by mouth)ထားရမယ်။ အစာအိမ်သွေးကြောထုံးတွေပေါက်တာလို့ သံသယရှိရင်တော့ terlipressin လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးတမျိုးသွင်းမယ်။ ပိုးသတ်ဆေးသွင်းခြင်း၊ ဆီးပိုက် ထည့်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်မယ်။
သွေးပြန်ဖြည့် အရည်ပြန်ဖြည့်ပီးလို့ လူနာအခြေအနေ တည်ငြိမ်လာပီဆိုရင်တော့ အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း (Endoscopy) အမြန်ဆုံးလုပ်ပြီး သွေးတိတ်အောင် လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုတွေ လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
-အစာအိမ်အနာရှိရင်တော့ သွေးထွက်တဲ့နေရာက်ု clip ညှပ်ခြင်း၊ cautry မီးရှို့ခြင်း၊ Adrenaline ဆေးဖြန်ခြင်း ဒီနည်းတွေနဲ့ သွေးတိတ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မှန်ပြောင်းကြည့်အပြီး အက်ဆစ်ဓါတ်နည်းစေတဲ့ PPI ဆေးသွင်းခြင်း၊ H.pylori လို့ခေါ်တဲ့ အစာအိမ်ပိုးအတွက် ပိုးသတ်ဆေးပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
-အသည်းခြောက်လို့ အစာအိမ်သွေးကြောထုံးတဲ့နေရာက ပေါက်လို့ သွေးထွက်ရင်တော့ ကြိုးချည်ခြင်း(Banding), ဆေးထိုးခြင်း (Sclerotherapy) စတာတွေ လုပ်ဖို့လိုမှာပါ။ ဒီလို ကုသမှုတွေ လုပ်ပြီးတာတောင်မှ တနှစ်အတွင်းနောက်တကြိမ်ပြန်သွေးထွက်ခြင်း (Re-bleeding) ဖြစ်ဖို့ ၆၀ရာခိုင်နှုန်း risk ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်းခြောက်တဲ့သူတွေမှာ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်တဲ့ အခြေအနေမရောက်ခင်တည်းက ကြိုတင် ကာကွယ်သင့်ပါတယ်။
အသည်းခြောက်တဲ့ လက္ခဏာတွေ့မယ်၊ သို့မဟုတ် အာထရာဆောင်းမှာ အသည်းခြောက်တာသိတာနဲ့ ကြိုတင် အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်ပီး လိုအပ်တဲ့ နေရာကို ကြိုးချည်ခြင်း ကုသခြင်းတွေလုပ်ထားမယ်။ Beta-blocker ဆေးဖြစ်တဲ့ propranolol ပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇီဝက ( ဆေး- ၁ )
【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】နှလုံးခုနျ စညျးခကျြမမှနျခွငျး (Atrial fibrillation) အ‌ကွောငျး တစတေ့စောငျး
【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】နားပွညျယိုခွငျး အကွောငျးသိကောငျးစရာ